Maleeshiyo beeld ka soo jeeda gobolka bari ee loo diyaariyey
inay muqdisho ku soo duulaan
Buluugleey Jun 25,2005
Malleeshiyada gobollada bari laga soo ururiyay oo ay wehliyaan ciidamo Itoobiyaan ah ayaa loo diyaariyey inay ku duulaan magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdhisho. Ciidamadan ayaa tababar ugu dhamaaday balliga Abqaale oo 3km u jira Degmada Xarfo oo ka tirsan Gobolka Mudug, una jirta 70km Magaalada Gaalkacyo. Ciidamadaan ayaa waxaa hogaaminaya Cawil Dhiig-sokeeye, Cabdirisaaq Afgaduud iyo Maxamed Aadan Bidaar.
Taas waxay mar kale cadaynaysaa sida Col. Cabdullahi Yusuf iyo malleeshiyooyinkiisa ay u doonayaan inay colaad hor leh ka bilaabaan dalka Soomaaliya, kadibna ay soo geliyaan ciidamo Itoobiyaan ah oo u qabta magaalada Muqdisho.
Col. Cabdullahi Yusuf wuxuu ku guul dareystay in uu kalsooni buuxda ka helo dadka deggan koonfurta Soomaaliya, taasina waxay keentay inuu doorbido inuu la yimaado siyaasad ku dhisan xoog ku maquunis. Taas oo ay caadaatay kadib markuu ku gacan seeray shirkii lagu dhex-dhexaadinyay isga iyo golaha baarlamaanka.